Xaasas badan oo la guursado ma waxay xal u tahay dhibaatada Ruushka ? - BBC News Somali
Muxuu yahay sheyga ka hortagi kara akhlaaq darada iyo macaasida Ruushka ?
Sida uu sheegayo mid ka mid ah muftida islaamka oo ku sugan magaalada Moscow, Ildar Alyautdinov, jawaabto waxay tahay in xaasas badan la guursado.
Waxa uu u sheegay wakaalada wararka ee RIA Novosti ragga qaba wax ka badan hal xaas"ma xaqiijinayan xuquuqda haweenka oo kali ah " balse sidoo kale "waa kuwa ay aad u yartahay inay macaasida maalmahan sii badanaysa ay ku dhacaan ".
Muftigan ayaa sheegay in xaasas badan oo la guursado ay xal u tahay dhibaatada dhanka fuxshiga ee Ruushka,maadama ay dumarku ka badan yihiin ragga dalkaasi.
Jawaabaha laga bixiyay hadalka Muftiga ayaa ahaa kuwa ballaaran islamarkana kala duwan iyada oo arrintan looga doodayay baraha bulshada.
Qaar badan oo ka mid ah haweenka iyo qaar ka mid ah ragga ayaa sheegay in ragga Ruushka aysan dhaqaalo ahaan awoodin hal xaas iskaba daayoo dhowr xaas.
"Dadka Ruushka oo ay ka mid yihiin muslimiinta ma quudin karaan hal xaas iyo labo caruur ah,waxaadna ka hadlaysaa xaasas badan ,"ayuu yiri mid ka mid ahaa adkii ra'yigooda dhiibanayay.
Mid ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaala ayaa yiri"bal qiyaas waxa dhaci kara xitaa qaar ka mid ah ragga ma taageeraan caruurtooda ."
Mid kale ayaa keenay su'aasha ah : "maanta ma waxaa lagu jiraa sanadka 2019 ?"
Mid ka mid ah dadkii ra'yigooda ka dhiibtay ayaa yiri: "Muftiga reer Moscow mufti Ildar Alyautdinov, ee ku baaqaya in raggu guursado xaasas badan , waxaa uu hilmaamayaa xuquuqda la siman taa ee haweenka taasi oo ah in sidoo kale la sharciyeeyo in haweenku ay rag badan guursadaan.
Qaar ka mid ah dadka ayaa soo xigtay heestii caanka ahayd xiligii midowga Soofiyeet oo ahayd hees madadalo ah oo ka hadlaysay xaasaska badan ee la guursado.
: "Haddii aan suldaan ahaan lahaa waxaan guursan lahaa saddex xaas,
Kaniisadda Orthodox ee Ruushka ayaa sidoo kale arrintan ka hadashay .
"anagu in hal xaas la guursado waa mid xushmad ah oo ku aadan doorka ragga iyo dumarka iyo aqoonsiga la aqoonsanayo sinaanta dhanka sharafta ee guurka," waxaa sidaasi wakaalada wararka ee RIA Novosti u sheegay afhayeen u hadlay kaniisadda.